मदनकृष्ण श्रेष्ठ डिस्चार्ज
काठमाडौँ । वरिष्ठ हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ बुधवार बिहान डिस्चार्ज भएका छन्। मुटुमा समस्या देखिएपछि गङ्गालाल अस्पताल भर्ना भएका उनी स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । चिकित्सकले एक महिना आराम गर्न मदनकृष्णलाई सल्लाह दिएका छन्। मुटुमा रगत प्रवाह हुने नसा बन्द भएर अत्यधिक मुटु दुखे पछि शुक्रवार बेलुका अस्पताल लगिएको थियो । उनको शनिवार बिहान […]
काठमाडौँ । केही हप्ताअगाडि कोरोना संक्रमणमुक्त भएका हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना, मुटुमा थपियो स्टेन्ट
केही दिनअगाडि मात्रै कोरोनालाई जितेका हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुन: अस्पताल भर्ना भएका छन्
बरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना
काठमाडौं: बरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना भएका छन्। हिजो अचानक मुटुमा समस्या आएपछि श्रेष्ठ गंगालाल अस्पताल भर्ना भएका थिए।उनको मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरिएको उपचारमा संलग्न डा धर्मा यादवले बताए। हिजो गंगालाल भर्ना भई एन्जियोप्लास्टी गरेपछि सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा राखिएका भएका श्रेष्ठलाई आज डिलक्स रुममा सारिएको समेत डा यादवले बताए। हाल उनको अबस्था खतरा मुक्त रहेको पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।केही अघि मात्र उनी कोरोना संक्रमणब
वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना
काठमाडौंँ । बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना भएका छन् । अक्सिजनको मात्रा कम देखिएको कारण श्रेष्ठलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको कलाकार हरिवंश आचार्यको भनाई छ ।
हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण उपचार गराइरहेका मदन केही दिन अगाडि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । ८ दिनसम्म अस्पतालमा उपचार गराएपछि उनी घर फर्किएका थिए । तर, घर फर्किएको भोलीपल्टै अक्सिजनको तह कम भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ […]
अक्सिजन लेभल घटेपछि मदनकृष्ण पुनः अस्पताल भर्ना
काठमाडौं। गत शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अक्सिजन लेभल कम भएपछि पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन्। बैशाख ६ गते उनीसहित परिवारका पाँच जना सदस्य कोरोना संक्रमित भएका थिए। होम आइसोलेनसमा बसिरहेका बेला उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अहिले फेरी अक्सिजन लेभल कम भएर कमजोरीपना देखिएपछि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको कलाकार हरिवंश आचार्यले बताए।
कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुनः अस्पताल भर्ना, श्वासप्रश्वासमा समस्या
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई फेरि अस्पताल भर्ना गरिएको छ
फेरि अस्पताल भर्ना भएका कलाकार मदनकृष्णलाई कस्तो छ?
काठमाडौं : अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर गइसके पनि स्वास्थ्यमा पुन: समस्या देखिएपछि कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ पुन: अस्पताल भर्ना भए। अहिले उनको अवस्था कस्तो छ त? अहिले श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि कोरोना भाइरसको रिपोर्ट भने नेगेटिभ नआएको अर्का कलाकार हरिवंश आचार्यले जानकारी दिए। 'मदन दाइको अक्सिजन लेबल अलि घटेर कमजोरीपना…